Alphabet has settled Sexual harassment claims overalawsuit to their shareholders. ﻿
Alphabet has settled Sexual harassment claims overalawsuit to their shareholders.
Alphabet က ရှယ်ယာရှင်များရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်စော်ကားမှုများအပေါ် တရားစွဲဆိုမှု၏ နောက်ဆုံးတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များ
Google ရဲ့ ပင်ရင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Alphabet ရဲ့ ရှယ်ယာရှင်များဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်စော်ကားမှုများ ကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရမှုများရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါတရားစွဲဆိုခြင်းများအတွက် နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်ဟာ ထွက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆုံးအဖြတ်တွင် Alphabet က သူတို့ရဲ့ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကို အနာဂါတ်တွင် ထိုကဲ့သို့ပြဿနာများဖြစ်ပွားမှုမရှိလာစေရန်အတွက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်တွယ်သွားဖို့နဲ့ လာမည့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃၁၀ ခန့်ကို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ညီညွှတ်စွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ပရိုဂရမ်များတွင်အသုံးပြုသွားဖို့အတွက် ကတိကဝတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အထက်တရားလွှတ်တော်တွင် အဆုံးအဖြတ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါအဆုံးအဖြတ်တွင် ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လဲ Alphabet ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ နစ်နာမှုများကို တိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီး သီးသန့်ဖြေရှင်း စရာလိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ခန့်က အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွင်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်စော်ကားမှုတွေ ပေါက်ကြားသွားခဲ့တဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းများက အဆိုပါပြောင်းလဲမှု ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Alphabet ကလဲ သူတို့အနေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်စော်ကားမှုများ နဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထားရှိသွားမှာမဟုတ်ပဲ မန်နေဂျာ များနဲ့ လက်အောက်ငယ်သားများအကြားချစ်ကြိုက်မှုများကိုလည်း လုံးဝ တားမြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ New York Times က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်ထုတ်သတင်းတစ်ရပ်အရ ထိပ်တန်းအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သလို Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုတီထွင်သူဖြစ်တဲ့ Andy Rubin ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်စော်ကားမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်တွင်တောင်မှ Alphabet က ထိုသူအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၀ ကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်သည့်အခါတွင် ပေးအပ်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်မှ စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။